VIBRANCE® TOP - heer cusub oo ka ilaalinta baradhada cudurada ciidda iyo cayayaanka - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
VIBRANCE® TOP - heer cusub oo ka ilaalinta baradhada cudurada ciidda iyo cayayaanka
Wax-soo-saarka baradhada ee waddankeena waa mid sii xoogaysanaya. Wax-soo-saarka sarreeya maaha wax aan caadi ahayn, laakiin cudurrada iyo cayayaanka ayaa si xun u saameyn kara tayada alaabta. Alaabooyinka ilaalinta dhirta ee casriga ah waa mid ka mid ah hababka lagula tacaali karo dhibaatadan.
Rhizoctonia waxay keentaa dhibaatooyin badan oo ku saabsan baradhada beerashada. Wakiilka sababa ee rhizoctoniosis waa fangaska ciidda Rhizoctonia solani JG Kuhn - meel walba loo qaybiyey, dhammaan noocyada carrada.
Baradhada, cudur-sidaha ayaa waxyeello u leh bilawga bilawga: waxay ku dhacdaa sprouts, yaraynta tirada caleemaha wax soo saarka leh. Dhaawaca hore, rhizoctoniosis wuxuu keenaa noocyo kala duwan oo qallafsan iyo dhaawaca digriiga (waxay isu muujin karaan sida dildilaaca, mesh dusha sare ee tuberka, qaabka "god", boogaha qoto dheer).
FIRKA® TOP waa daaweeyaha jiilka cusub, iyada oo ay ugu wacan tahay qaybo si fiican loo doortay, waxay kuu ogolaaneysaa inaad barnaamijka goosato oo aad hesho baradho tayo sare leh xitaa xaaladaha cimilada xun. Iyada oo qayb ka ah dawada, fungicide cusub - sedaxan, waa unuggii ugu horreeyay ee SDHI molecule ee ay samaysay Syngenta oo keliya ee ilaalinta abuurka. Walxaha firfircoon ee fasalka SDHI (succinate dehydrogenase inhibitors) waxay joojiyaan neefsiga unugyada pathogene. Sedaxan waa u adkaysata leaching iyadoon loo eegin nooca ciidda, iyo isla mar ahaantaana mobile ku filan si ay u qaybiyaan ciidda iyo guurto iyada oo geedo, taas oo u oggolaanaysa ilaalinta geedo.
Intaa waxaa dheer, sedaxan ee ka kooban VIBRANCE® TOP waxay kicisaa kobaca nidaamka xididka, hubinta in ay ka dhacdo dhammaan dusha sare ee cirifka, isla markaana waxay ka hortagtaa waxyeellada cudurada carrada. Wanaajinta milanka iyo xasiloonida sedaxan si aad loogu kalsoonaan karo ayaa u ilaalisa geedka iyada oo aan si xun u saameynin noolaha faa'iidada leh ee rhizosphere.
Marka lagu daro sedaxan, diyaarinta waxaa ku jira fludioxonil, sidaas darteed, isku darka laba fungicides ee nidaamka deegaanka iyo ficil xiriir, VIBRANCE® TOP aad waxtar u leh in la xakameeyo rhizoctoniosis, qolof qalin iyo cudurrada kale.
FIRKA® TOP waxay ka diiwaan gashan tahay qiyaaso kala duwan - 0,4-0,7 l / t. Si aad u dooratid qiyaasta saxda ah ee daawada, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso tayada alaabta abuurka, "nadiifnimada" ee ciidda iyo xaaladaha cimilada inta lagu jiro beeritaanka. Qiyaasta sare waxay kordhin kartaa muddada daawada waxayna kordhisaa fursadaha dhirta si ay uga gudbaan xaaladaha adag iyada oo aan lumin wax soo saarka.
Miiska 1. Doorashada qiyaasta VIBRANCE® TOP waxay kuxirantahay xaaladaha beeritaanka iyo tayada abuurka
FIRKA® TOP waa:
Ka-hortagga muddada-dheer ee ciidda iyo cayayaanka dhulka (illaa 60 maalmood) sababtoo ah qiyaasta cayayaanka oo la mid ah ama ka sarreeya heerka caadiga ah.
Ka-hortagga la isku halleyn karo oo ka dhan ah noocyo badan oo cudur-sidaha ah oo ay ugu wacan tahay isku-darka laba fungicides ee qaabeynta
Nidaamka xidid ee dhirta ee la sameeyay: tan waxaa fududeeyay sifooyinka molecule sedaxan
Ku habboonaanta codsiga, sida qiyaaso kala duwan ayaa kuu ogolaanaya inaad doorato heerka ilaalinta looga baahan yahay goob gaar ah
Waad ku mahadsan tahay isku dhafka xuduudahan, VIBRANCE® TOP waxay bixisaa goosasho tayo sare leh oo tayo sare leh xaalad kasta.
Tags: "Syngenta"la dagaalanka rhizoctoniosis
Koonfur Afrika waxay Ugra u sheegi doontaa sida loo beero baradhada jawi aan wanaagsanayn
Gobolka Tervropol, waxay hubiyaan dhalidda noocyada baradhada guryaha